DEG DEG: Luka Modric iyo Dejan Lovren oo BAXAR wayn ku jiray iyo 5-Sano oo Xabsi oo lagu xukumi karo….(Sheekada Canshuur ma ahan) – Gool FM
DEG DEG: Luka Modric iyo Dejan Lovren oo BAXAR wayn ku jiray iyo 5-Sano oo Xabsi oo lagu xukumi karo….(Sheekada Canshuur ma ahan)
Byare September 19, 2018
(Europe) 19 Sab 2018. Xiddiga qadka dhexe ee Real Madrid Luka Modric iyo daafaca Liverpool ee Dejan Lovren ayaa Baxar wayn ku jira iyadoo ayna suuro gal tahay in lagu rido xukun shan sano oo xarig ah kaddib markii ay sameeyeen dhaar been abuur ah.
Sheekada lagu heysto labada laacib ee reer Croatia ayaa daba socota kiis xatooyo oo lagu maxkamadeeyay Madixii hore ee naadiga Dinamo Zagreb ee Zdravko Mamic.
Dacwad oogayaasha dalka Croatia ayaa sheeganaya in Lovren uu ka been sheegay dhaarta ku aadan heshiiskii uu uga tagayay Zagreb uguna biirayay Lyon 2010-kii.
Mamic oo isagu ka mid ah dadka saameynta ugu badan ku leh kubbada cagta dalka Croatia ayaa lagu helay dambi ku aadan inuu lacago isadaba mariyay heshiiskii uu Modric uga tagayay Zagreb toban sano ka hor iyo kii Lovren labo sano kaddib.
Madaxwaynihii hore ee Zagreb ayaa lagu xukumay xabsi Lix sano iyo bar, laakiin waxay iminku leerarka ku soo jeedaa labada ciyaaryahan.
Modric ee ku soo guuleystay xiddiga ugu fiican Koobkii adduunka iyo laacibka sanadka ee Yurub ayaa horaantii sanadkan lagu soo eedeeyay been abuur, laacibka ayaana badelay kulankii lagu sharfi lahaa ama kulankiisii sagootinta ee ku aadanaa heshiiskii uu 2008 uga soo tagay Tottenham.
Lovren ayaa isna wajahaya eedeyn la mid ah midaa, waxaana la baarayay sagaalkii bilood ee ugu dambeeyay kaddib markii la siyay kulan sagootin oo been abuur ah.
Modric iyo Lovren ayaa haddaba wajihi kara Shan sano oo xarig ah haddii lagu helo dambiyada lagu soo eedeeyay.
Labada laacib ayaa iminka sugaya taariikhda Maxkamadeentooda.
“Waxaan doorbiday inaan kusii sugnaado Barcelona, sababtoo ah waxaan ku faraxsanahay Cump Nou”… Rakitić
Ronaldo, Salah iyo Modrić keebaa mudan inuu ku guuleysto abaal marinta The Best? Waxaa ka jawaabaya Oliver Kahn